Articles tagged 'ndiraya'
Ngezi Platinum Stars sack Ndiraya 3 October 2018 HARARE - Ngezi Platinum Stars board yesterday made a surprising decision to sack coach Tonderai Ndiraya with just five games to go before 2018 Castle Lager Premiership season ends. The rumour mill then went into overdrive when the news broke late yesterday afternoon with Harare City's coach Ma...
We're still in it - Chakoroma 19 September 2018 HARARE - Ngezi Platinum Stars captain Liberty Chakoroma believes his side is still in with a big chance of winning their maiden Castle Lager Premiership title. The Mhondoro-Ngezi-based side suffered a major blow to their title quest when they went down 1-0 to relegation-threatened Yadah FC on ...
Small teams a concern for Ndiraya 18 September 2018 HARARE - Ngezi Platinum Stars coach Tonderai Ndiraya is worried that his team is not clinical enough when they face “small teams” which is now hampering their quest for a maiden Castle Lager Premiership title. Madamburo suffered a surprising 1-0 defeat at the hands of relegation-threatened Yad...
FC Platinum, Ngezi resume title race 12 September 2018 HARARE - After a one-week break, FC Platinum and Ngezi Platinum Stars will this afternoon continue with their battle for the 2018 Castle Lager premiership title. The two platinum teams have turned the championship race into a duopoly by performing exceedingly well than the rest of the other 16...
Mutare City derail Ngezi Platinum 28 August 2018 RUSAPE – Tonderai Ndiraya blasted his team's attitude after suffering a huge blow to their title ambitions following a disappointing defeat at the hands of fighting Mutare City Rovers in a Castle Lager Premiership match on Sunday. Ndiraya's charges came into the match in need of nothing less t...
Never Tigere sinks Ngezi Platinum 12 June 2018 Ngezi Platinum..............(1) 1 FC Platinum...................(0) 2 MHONDORO - If FC Platinum are to retain their Castle Lager Premiership title, then that will largely be down to the impact Never Tigere is making from the substitutes' bench. On Saturday, Tigere rose from the bench to ...
Ndiraya remains calm 9 April 2018 HARARE - It's only four games into the 2018 Castle Lager Premiership season but today's clash between log leaders Ngezi Platinum Stars and Chicken Inn at Baobab Stadium already promises to be a humdinger. Ngezi Platinum carry a 100 percent record into today's match having won all their first f...
Ndiraya sends chilling warning to rivals 4 April 2018 HARARE - Tonderai Ndiraya has sent a chilling warning to Ngezi Platinum Stars' Castle Lager Premiership title rivals by claiming his charges “will get even better”. The Mhondoro-Ngezi platinum miners thrust themselves among favourites to wrestle the championship from FC Platinum after starting...
Ngezi Platinum beat sorry DeMbare 30 March 2018 Ngezi Platinum.........1 Dynamos...................0 NGEZI - Ngezi Platinum Stars shot to the top of the Castle Lager Premiership log following yesterday's slender win over a disjointed Dynamos. Midfielder Xolisani Moyo scored the only goal of the match to help his side maintain their 100 ...
Easter blockbuster as Ngezi Platinum target DeMbare 29 March 2018 HARARE - The Castle Lager Premiership swings into full action this afternoon with early pacesetters Ngezi Platinum Stars welcoming troubled Dynamos at Baobab Stadium. Tonderai Ndiraya's charges have a 100 percent record so far following back-to-back 2-0 wins against Herentals and Triangle and ...
Squeaky bum time as title race resumes 14 November 2017 HARARE - The platform is now set for an intriguing four-horse title race as the Castle Lager Premiership resumes tomorrow after a one week hiatus that paved way for the Chibuku Super Cup. Log leaders Ngezi Platinum Stars, second-placed FC Platinum, Harare giants Dynamos and former champions Ch...
Ngezi Platinum back on top 6 November 2017 BULAWAYO - Ngezi Platinum Stars reclaimed pole position on the Castle Lager Premiership log standings after labouring to a slender 1-0 victory over relegated Bantu Rovers here yesterday. A first half strike by Donald Teguru proved enough for the visitors to collect maximum points and overtake ...
Poor finishing worries Ndiraya 25 October 2017 HARARE - Ngezi Platinum Stars coach Tonderai Ndiraya hopes his side will be more clinical in front of goal when they face Dynamos in a top-of-the-table Castle Lager Premiership match at Baobab Stadium on Saturday. Ndiraya's side go into this weekend's match in third place, two points behind l...